Dhameystirka heshiiskii Galmudug iyo Ahlu Sunna oo maanta ka dhacaya Dhuusamareeb – warqaat.com Information About Somali New's Today
HomeWARARKA MAANTADhameystirka heshiiskii Galmudug iyo Ahlu Sunna oo maanta ka dhacaya Dhuusamareeb
Dhameystirka heshiiskii Galmudug iyo Ahlu Sunna oo maanta ka dhacaya Dhuusamareeb
January 16, 2018 Cabdi nuur WARARKA MAANTA 0
Magaalada Dhuusamareeb ee Xarunta Maamulka Galmudug waxaa maanta ka dhaceysa dhameystirka heshiiskii Ahlu Sunna iyo Galmudug.
Amaanka Magaalada ayaa aad loo adkeeyay waxaana Magaalada ku qul qulaya mas’uuliyiin badan oo dowlad Goboleedayda iyo dowladda Federaalka ahba ka socda.
Magaalada hadda waxaa ku wada sugan dhamaan Siyaasiyiinta mucaaridka iyo muxaafidka ah ee ka soo jeeda Galmudug,kuwaas oo Dhuusamareeb u tagay ka qeybgalka munaasibadda isku darka Maamullada Galmudug iyo AHlu Sunna.
Labada dhinaca ayaa heshiis gaaray Bishii December ee Sanadkii la soo dhaafay waxaana munaasibadda lagu gaba gabeynayo heshiiska la iskuna darayo labada maamul ka dhaceysaa Dhuusamareeb.
Daawo Sawirada: Guddoomiyaha Gobolka Banaadir oo gaaray magaalada Dhuusamareeb
Buubaa: “Baarlamaanka Somaliland waa in lakala diraa”
53,997 total views, 1,884 views today
53,997 total views, 1,884 views today War ka soo baxay Hay’ada Nabadsugida iyo Sirdoonka Qarank ayaa waxaa lagu sheegay in Ciidamada Amniga ay Gacanta ku dhigeen Maxkaxdii ka dambeeyasay weerarkii dadka badan ku dhinteen ee lagu qaaday […]
54,066 total views, 1,883 views today
54,066 total views, 1,883 views today Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta qabatay munaasabad lagu daahfurayay Barnaamijka Carabiyaynta Dastuurka KMG ah oo ay ka soo qeybgaleen Wasiir Ku-Xigeenka Arrimaha Dastuurka iyo Safiirka […]
54,078 total views, 1,884 views today
54,078 total views, 1,884 views today Wareegto ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha Dowlad-goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam(Madoobe) ayaa Maanta oo Khamiis ah waxaa lagu Magacaabay Hanti dhowraha guud ee Jubbaland Wareegtada ayaa waxaa Hanti dhowrahaGuud ee Jubbaland […]
54,097 total views, 1,882 views today
54,097 total views, 1,882 views today Kulan socday in ka badan sideed saacadood ayaa waxa uu Turkiga ku dhexmaray Mas’uuliyiin uu horkacayay Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Soomaaliya Maaxamed Cabdullaahi Salaad(Omaar) iyo Mas’uuliyiinta Shirkadda Favori ee Maamusha Garoonka […]
54,139 total views, 1,886 views today
54,139 total views, 1,886 views today Taliye ku xigeenka Ciidamada Booliska Dowlad Goboleedka Galmudug Col, Cabdi Jaamac Cabdulle ayaa shaaciyay in kadib baaritaano ay sameeyeen ay heleen halkii laga soo abaabulay weerarkii lagu qaaday Xarun uu Gaalkacyo […]